Than Myint (GBNF) – HlaMin
By Saya U Moe Aung and group
U Ohn Khine (M 70)’s message :
Unfortunately he had to leave RIT without graduating, and went back to his home town Min Bu (or) Min Hla and worked asaphotographer. The number of GBNF (’64 first year intake) is now 65.
ဦးအုံးခိုင်(M70) ထံမှ ဦးလှမင်း (Ec,69) သို့ ရေးပို့သော သတင်းတစ်ခုတွင်
ကျွန်တော်တို့ အနုပညာမောင်နှမ၊ တစ်နည်း အနုပညာ ဂီတ ကိုချစ်မြတ်နိုးသူ ၊
၁၉၆၄ခုနှစ် ၀င်ခွင့်ရ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်း ကိုသန်းမြင့် (Mech)
သည် ၂၃-၁-၂၀၁၃ နေ့ တွင် ဘ၀တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားပြီ ဟုသိရပါသည်။
ကိုသန်းမြင့်သည် RIT အနုပညာအသင်းတွင်အစဉ်တစိုက်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး
မြန်မာဂစ်တာ၊ တယော စသော တူရိယာများအား ကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်နိုင်သူ
ဦးဆောင်ဦးရွက်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ ကျောင်းမပြီးပဲ ထွက်သွားရသည်ကို
ယခုလည်း သူ မရှိတော့ပေမယ့် သူ့အနုပညာကိုတော့မမေ့နိုင်ပါ။
Mar Mar Yee (M75) wrote :
really sad to know that : w/o Knowing he was ill, My hubby and me called him to invite for SPZP on our rehearsal day ( on 26th dec 2012 ) in Ygn ;
Than Po (M75) wrote :
မရှိရှာတော့ဘူး။ တော်တော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
Myint Pe (M72) wrote :
ကျောင်းကပွဲတွေမှာ ကိုယုစွမ်ပြီးတော့ ကိုသန်းမြင့်ဆက်လုပ်ပါတယ်။
အခန်းထဲက ဂီတာသံမပြတ်အောင်ဝါသနာကြီးပါပေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်
Saya U Moe Aung added :
မီးမညှိနိုင်လောက်အောင် ဂီတရေယဉ်ကြောမှာအမြဲနစ်မျောနေတတ်တဲ့ သူ့အသွင်ကို
အခုတော့ ကိုသန်းမြင့်အတွက် သောကမီး၊ လောကမီးတို့ပါ ငြိမ်းသွားပါပြီ။
ကိုသန်းမြင့် (၁၉၆၄ ခု ၀င်ခွင့်ရ RIT ကျောင်းသားဟောင်း)
မြန်မာဂစ်တာ ၊ မယ်ဒလင် ၊ တယော၊တို့အား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်
တီးခတ်ခဲ့သူ၊တေးသီချင်းများ သီဆိုခဲ့သူ ၊ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်း၊
၁၉၆၄ခုနှစ်ဝင်ခွင့်ရ ကိုသန်းမြင့် (MECH) ၂၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၃ တွင်
ကျောင်း အနုပညာအသင်း ပဒေသာကပွဲများတွင် အစဉ်တစိုက် ပါဝင်ပြီး
အနုပညာလုပ်ငန်းများအား ဦးစီးဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ…။
ကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင်ပြီး ဆေးပေါ့လိပ်ခဲပြီး ပြုံးတုံ့တုံ့လေးနေတတ်သူ …။
ညနေပိုင်းကျောင်းဆင်းချိန် ဇာတ်တိုက်တိုင်း အများက
မုန့်ပဲသွားရေစာစားကြပေမယ့် သူကမစား… လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တည်းဖြင့်
နေနိုင်သူ…၊ ပုံပန်းက ခပ်ပိန်ပိန်၊ ခုထက်တိုင် စာရေးသူ မျက်စိထဲက
ရန်ကုန် ၂၀၁၂ ဆရာပူဇော်ပွဲ တုန်းက စန္ဒယား ချိုချိုယဉ် နှင့် တွေ့ တော့
သူမသတင်းပေး ပြောပြသည်ကိုပင်မယုံ…။ ကိုသန်းမြင့်
တော်တော်နေမကောင်းဘူးတဲ့…။ ဘာရောဂါလဲတော့ မသိရသော်လည်း
ဆရာပူဇော်ပွဲ ကတစ်ဖက်၊ ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဇာတ်တိုက်ရတာကတစ်ဖက်
Saya U Moe Aung, Saya U Saw Tun, Saya U Thet Lwin and Saya Dr. Kyaw Sein headed the RIT Ah Nu Pyinnya Ah Thin.
Saya U Khin Maung Tint served as Secretary. He foundaSwel Daw Yeik Minthamee as his soul mate.
U Soe Aung also served as Secretary. He wrote articles.
Saya Dr. Taing Oke and U Than Po are some of the Zat Sayas.
“Don Min” U Yu Swan and Sayama Daw Tin Tin Myint hosted many “Pon Chan Chan” events in Singaapore. They are still active Ah Nu Pyinnyar Shins like many other rejuvenated RIT Aphogyis and Aphawgyis.
U Win Thein (M 67, GBNF) was an outstanding organizer not just for Mechanical but for the whole RIT. He stenciled the [weekly] Set Hmu Thadin Zin. He organized gatherings including the Geeta Seesar [Musical Extravazanga].
U Kyaw Oo (M67, GBNF) tuned his piano. He played classical and Kar La Baw music. He represented RIT in rowing.
Chi Hte Nu Nu Kyaw (U Kyaw Htin), La Min, Seik Kyi (U Myint Pe), Tet Lu(U Myint San) and Ba Kyaw (U Aung Kyaw Myint) are some of the RIT Lu Shwin Daws.
Daw Mya Than Win, Daw Tin Tin Myint, Daw Mar Mar Yee, Daw Shwe Zin Ma and Daw Khin Sandar Tun are some of the RIT Minthamees.